Dogecoins များသတ္တုတွင်းတူးရန် (တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း) | Linux မှ
Dogecoins များသတ္တုတွင်းတူးရန် (Installation and use)
IvanLinux | | သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
အ ကို virtual ငွေကြေး ၎င်းတို့သည်မကြာသေးမီကဖက်ရှင်ဖြစ်လာပြီးလူကြိုက်အများဆုံးမှာ -
1.1 အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုရန် meme တူသောအသံ? ee
2 Mining on Linux (x64 system ပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်အကြံပြုထားသည်):
3 Android မှာ Mine:
အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုရန် meme တူသောအသံ? ee
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်လူကြိုက်များသောအင်တာနက် meme အပေါ် အခြေခံ၍Dogeဘယ်ခွေးလဲ Shiba inu ပါ။ သင်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုနှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုသိလိုလျှင်: dogpedia ဝီကီပီးဒီးယား
Mining on Linux (x64 system ပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်အကြံပြုထားသည်):
သတ္တုတွင်းအတွက်ကျနော်တို့အောက်ပါမှီခို install လုပ်ရမယ်:
တည်ဆောက် - မရှိမဖြစ်
Ubuntu (သို့) အနကျအဓိပ်ပါယျများပေါ်တွင် (ဖြစ်နိုင်သည်က Debian တွင်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်):
package ကို SRC နဲ့ download လုပ်တယ်။
သငျသညျ«အသုံးပြုသူ»« worker »နှင့်«စကားဝှက်»ကိုအစားထိုးရန်လိုသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ သွား၍ မှတ်ပုံတင်ရန်မှတ်ပုံတင်ပါ
Dashboard တွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင် My Workers ကဏ္ enter ကိုဝင်ရောက်လိမ့်မည်။ My Workers အတွင်း၌သင်လိုချင်သောအမည်နှင့်စကားဝှက်ဖြင့်လုပ်သားကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ ပြီးပြီဆိုရင်အောက်ပါ command ကို configure လုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် "user" ကို nut2pools တွင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည့်အသုံးပြုသူ၊ "worker" ကိုအစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးခဲ့သောအလုပ်သမား၏အမည်နှင့်အစားထိုး "အစားထိုး" ကိုအစားထိုးသူ၏စကားဝှက်ဖြင့်အလုပ်သမား၏အစားထိုးသည်။
အဆင်သင့်! သငျသညျတူးဖော်ပြီးဖြစ်သည်, သင်သည်ပမာဏကိုမြင်နိုင်ပါသည် ခွေးရူး အဆိုပါ Dashboard တွင်တူးဖော်
Android မှာ Mine:
Android တွင်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုရန်အတွက် Play Store မှအောက်ပါ app ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။
Dashboard တွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင် My Workers ကဏ္ enter ကိုဝင်ရောက်လိမ့်မည်။ My Workers အတွင်း၌သင်လိုချင်သောအမည်နှင့်စကားဝှက်ပါသော Worker တစ်ခုကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။
ဤအရာပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ DroidMiner ကိုဖွင့်သည်။
« Mining Pool URL »တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသည် -
"Username" တွင်သင်ယခင်ကသင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သောစာမျက်နှာ၏အသုံးပြုသူအမည်၊ သင်ဖန်တီးထားသောလုပ်သား၏အချိန်ကာလနှင့်အမည်ကိုထည့်သွင်းပါ။ ဥပမာ - user.worker
«စကားဝှက်»တွင်အသုံးပြုသူ၏မ ၀ င်သူ၏စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
« 1 »တွင်သင်၏မိုဘိုင်းရှိသည့်အရေအတွက်ကိုရွေးချယ်ပါ။
ရွေးချယ်မှု« LTC / DOGE / XPM »ကိုရွေး။ « Start »ကိုနှိပ်ပါ
မင်းလုပ်နေပြီ သငျသညျ၏ပမာဏကိုတွေ့နိုင်ပါသည် ခွေးရူး အဆိုပါ Dashboard တွင်တူးဖော်
MS Windows တွင် Dogecoins တူးဖော်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်၊ သို့သော်ဤဘလော့ဂ်သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုမသတ်မှတ်ထားပါ။ 😉
ကျွန်ုပ်၏ Dogcoins လိပ်စာကို Pss 🙂 DAQVhckjg72YsLWXTGUqzu46gbH9Phcq79
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Dogecoins များသတ္တုတွင်းတူးရန် (Installation and use)
Virtual ငွေကြေး၏ဤခေါင်းစဉ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့။ ဘောဂဗေဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဘယ်လိုတန်ဖိုးရှိနိုင်မလဲဆိုတာနားမလည်ဘူး။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အရန်လိုတာကိုရွှေ၊
Bitcoins အကြောင်းအမြဲတမ်းကြားခဲ့ဖူးပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်တခြားနည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတာကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်။ ငါဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ဒီကိစ္စကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတူးဖို့လိုလိမ့်မယ်။
ငါသည်လည်း "သတ္တုတူးဖော်ရေး" အလွန်စပ်စုရှာတွေ့။ ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်မဟုတ်လော ငါငွေမကုန်နိုင်ဘဲငွေရနိုင်မလား?
သီအိုရီအရကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာပိုက်ဆံသည်လေကိုလေထဲမှထုတ်။ မရနိုင်သောနေရာတစ်ခုသို့ရောက်သည်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာရှိတဲ့ငွေကြေးအားလုံးဟာတစ်စုံတစ်ရာကိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပိုက်ဆံကိုအခြားတစ်ယောက်ယောက်ကသူတို့ကိုပစ္စည်းတစ်ခုပေးဖို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးမယ်လို့လက်ခံထားလို့ပဲ။ စင်ကြယ်သောထင်ကြေး, wow ။
ရိုးရာငွေကြေးများ၏အဓိကအားသာချက်များကို virtual ငွေကြေးများထက်မည်သို့သောအကြောင်းပြချက်ကိုရှင်းပြသည့်အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာတစ်ခုခုကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူတွေရှိတယ်၊ ငွေကြေးတစ်ခုခုကိုငွေပေးချေတာကိုလက်ခံတဲ့လူတွေရှိတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတစ် ဦး ဦး ကဒီပိုက်ဆံကိုကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုပေးဖို့သူတို့ကိုလက်ခံတော့မယ်လို့ယုံကြည်လို့ပါ။
မင်း အတိအကျဒင်္ဂါးပြားများနှင့်တူတူ ...
ဘယ်သူမှရွှေစံချိန်စံညွှန်းကိုမလိုက်လျှောက်ပါ။ သူတို့အခြေပြုထားသောအရံများ (သူတို့၏ "ယုံကြည်မှုအရင်းအမြစ်") သည်အခြားသောငွေကြေးများဖြစ်သည်ဟုထင်ရသည်။
«ယနေ့ခေတ်ငွေကြေး၊ virtual သို့မဟုတ်မပါ ... »
Hector Quispe ဟုသူကပြောသည်
လောလောဆယ်အားလုံးငွေကြေးကို virtual ဖြစ်ကြသည်။ (Virtual သည်သက်သက်မဟုတ်ဘဲ)
Hector Quispe အားပြန်ပြောပါ
သတ္တုတူးဖော်ရေးဒင်္ဂါးပြားများအတွက်အလုပ်လုပ်ကဲ့သို့တူညီသည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာစွမ်းရည်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို cryptocurrency network သို့ပေးသည်၊ သို့မှသာ၎င်းသည်၎င်း၏စီးပွားရေးကိုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်၊ ပြန်လည်ပေးဆပ်လျှင်သင့်အားထိုငွေကြေးနှင့်ပေးချေလိမ့်မည်။ အနည်းဆုံးဒါငါနားလည်သဘောပေါက်အရာဖြစ်တယ်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ အရင်ကဒင်္ဂါးပြားတွေဟာသူတို့လုပ်ထားတဲ့သတ္တုတွေတန်ဖိုးရှိပြီးဒီသတ္တုကိုမွှေလိုက်တာကတစ်နိုင်ငံလုံးဒေဝါလီခံခြင်းနှင့်အဓိကရုဏ်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်ထိုဒင်္ဂါးများကိုရွှေစံချိန်စံညွှန်းဖြင့်စတင်သုံးစွဲလာကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဒင်္ဂါးတိုင်းသည်“ X Peso of gold” ဖြစ်သည်” ဟုဆိုလိုသည်။ သို့သော် ၁၉၇၃ (သင် xD were ကလေးဘဝတုန်းက) ၏ရေနံအကျပ်အတည်းနောက်ပိုင်းတွင်ထိုဒင်္ဂါးများသည်တန်ဖိုးမရှိပါ။ ဘာမျှမအားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြု, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ထင်ကြေးဖြစ်ကြပြီး "ထုတ်ပေးတိုင်းပြည်ကိုသင်ပေးဆောင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်မှု။ " (ဤသည်အလွန်, အလွန်အထက်ဖြစ်ပြီးဤခေါင်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုမြည်းကဲ့သို့ရေးသားသောကြောင့်, သင်ဝီကီပီးဒီးယားတွင်ဖတ်ရန်သင့်အားအကြံပေးကြဘူး) ။
ယခုအခါစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးသည်ဒေါ်လာပေါ်တွင်အခြေပြုထားသောကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်ယင်း၏ကြွေးမြီများကိုပေးဆပ်ရန်အတွက်ငွေကြေးတန်ဖိုးကိုမြှင့်တင်ရန်ကုန်ကျနိုင်သည်။ အများအားဖြင့် "ပုံနှိပ်လက်မှတ်တွေ။ " ဟုခေါ်သည် သို့သော်ကျန်ငွေကြေးများအားလုံးသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာအပေါ်အခြေပြုထားသဖြင့်ဈေးကွက်တွင်စျေးကြီးလွန်းခြင်းကြောင့်၎င်းတို့အားတန်ဖိုးဖြတ်ရန်ဖိအားပေးခံရသည်။ သင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးရန်၊ အီးယူ၊ ဂျပန်နှင့်အမေရိကန်တို့သည်ငွေစက္ကူများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ သူတို့သည်ငွေကြေးတည်ငြိမ်ရန်ကြိုးစားသောကြောင့်ရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲနှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာငွေပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သို့သော်တစ်နေ့တွင်ဒီပေါက်ကွဲမှုသည်သင်ကျူးဘားတွင်စီးပွားရေးမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စျေးကွက် (နှင့်သင်သေချာဘို့အ splash ပါလိမ့်မယ်) ။
ငွေကြေးဆိုင်ရာ algorithm တွင်ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲထားသည့်အရာကိုသတ္တုတွင်းတူးဖော်နိုင်သည်။ အစတွင်အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်သာရှိပြီးအရင်းအမြစ်များပိုများလာသည်။ ကန့်သတ်ချက်သည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသည်။
မည်သည့်ငွေကြေးမှအမှန်တကယ်ထောက်ခံချက်မရှိပါသို့သော်၎င်းသည်အယောင်ဆောင်ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုထုတ်ပေးသောတိုင်းပြည်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတွင်သင်ယုံကြည်မှုရှိသည်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွက်ဒေါ်လာသည်ရွှေစံနှုန်းနှင့်မကိုက်ညီပါ။
သင်ပြောသည့်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းတစ်ခုအနေဖြင့်ငွေကြေးများသည်တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးမှရရှိသောယုံကြည်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။ သို့သော်သူတို့၏တန်ဖိုးကိုနိုင်ငံတော်ကထိန်းချုပ်ထားသည်။ အိုဘားမားအားတရုတ်သမ္မတအားစွန့်ခွာရန်ပြောသည့်အခါရှင်းလင်းသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် ပို့ကုန်ပိုမိုချောမွေ့စေရန်ငွေကြေးတန်ဖိုး (သို့) ဗင်နီဇွဲလားကဲ့သို့ပင်ငွေကြေးတန်ဖိုးမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောဥပမာတစ်ခုမှာယူရိုဇုန်အကျပ်အတည်းကာလအတွင်းယူရိုငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းသည်သမိုင်းအရကျဆင်းခဲ့သည်၊ အရာခပ်သိမ်းသည်ဇုန် (သို့) နိုင်ငံမှရရှိသောယုံကြည်မှုနှင့်၎င်း၏စီးပွားရေးဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
Bitecoins သည်သုံးစွဲသူများနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေမလိုသည်ပေါ်တွင်သာအခြေခံသည်။ သူတို့အပေါ်ထားရှိသောအကျိုးစီးပွားသည်တကယ့်ငွေကြေးနှင့်မနှိုင်းယှဉ်ပါ။
သံသယနှစ်ခုသာ - ၁) ဒီ Dogecoins တွေရဖို့ငါတို့ဖြေရှင်းမယ့် Algarisms တွေကိုဘာအတွက်သုံးသလဲ။ ၂။ KDE အတွက် graphical interface ရှိသလား။
သူတို့အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်အရာများစွာအတွက် ... စုံစမ်းစစ်ဆေးပါ
မင်းဘာလို့ graphical interface တစ်ခုလိုချင်ရတာလဲလို့ငါတွေးမိတယ်။
ဝိုး! ငွေအမြောက်အများ, ဒါကြောင့် Rich
ငါ Dogecoins တူးဖော်နေပေမယ့် cpmininer အစား cgminer ကိုသုံးတယ် (ငါ AMD GPU ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအသုံးချပြီး) [အကြွေစေ့များစွာကြွယ်ဝစွာ၊ crypto အများကြီး] ။ သငျသညျလိုလျှင်ငါထိုလမ်းကိုသတ္တုတွင်းဖို့ဘယ်လိုရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။
စကားမစပ် Git မှာတိုက်ရိုက်ကူးယူစရာမလိုဘဲ linux ပေါ်မှာ Dogecoin ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုရဖို့လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုမသိဘူးလား။ ငါ repository တစ်ခုရှိခဲ့အလိုရှိ၏ ... Ah ခဏထွက်, ကူး, ငါ XD repository ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် https://launchpad.net/~cwayne18/+archive/doge
ငွေကို "ဘယ်နေရာမှာမှမရ" ရသည့်အတွက်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်၊ သို့သော်ရိုးရာငွေကြေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တန်ဖိုးမကျပါ။ မျှော်လင့်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာ cryptocurrency တန်ဖိုးသည်ရိုးရာငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းသွားခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်ရန်ငွေကြေးအမျိုးအစားတစ်ခုခုအပေါ်မှီခိုခြင်းမရှိတော့သည့် (သို့မဟုတ် cryptocurrencies မည်သည့်အစစ်အမှန်တန်ဖိုးနှင့်မျှမတူသော) နေ့ကိုစောင့်ဆိုင်းသည်။
လေ့လာသူအဖြစ်ရှုမြင်သည်ငါ့အမြင်အနေဖြင့်, ယနေ့အားလုံးငွေကြေး, ကဘာပဲ, သူတို့တိုင်းပြည်သို့မဟုတ်အုပ်စု၏စီးပွားရေးနှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားပိုမိုထောက်ပံ့နေကြတယ်ငါ့ထံသို့ထင်ရ, ဒါအလွန်အမြန်အကျိုးစီးပွားကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နှင့်တင်သွင်းသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအလွန်အမင်းတန်ဖိုးရှိဖြစ်ခြင်းများအတွက်စျေးကွက်ဖြစ်ခြင်း အမြတ်ထုတ်ပေးသည်
နောက်ထပ်ပေါ်ပေါက်လာသောအချက် (သို့) မေးခွန်းမေးခြင်းဤငွေကြေးအမျိုးအစားဖြင့်အွန်လိုင်းစတိုးမည်မျှဝယ်ယူထားသနည်း။ ဥပမာ Dogecoins နဲ့ဘယ်မှာဝယ်လို့ရမလဲ။
Dogecoin ဖြင့်သင်မည်သည့်စတိုးဆိုင်များတွင် ၀ ယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အဓိကသော့ချက်မှာ Bitcoin အတွက် Dogegoin ကိုလဲလှယ်ပြီးသင်သိသည်။ Bitcoins ဖြင့်စတိုးဆိုင်များတွင် ၀ ယ်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ဘဏ်အကောင့်သို့လွှဲပြောင်းခြင်းဖြစ်စေ D.
Dogecoin ကို Bitcoin သို့ဤနေရာတွင်သင်ပြောင်းနိုင်သည်။ https://bter.com
ဒီမှာပျောက်ဆုံးနေတာတစ်ခုပဲ။ သင့် system ပေါ်တွင် dogecoin ပိုက်ဆံအိတ်ကိုထည့်ပါ။ ဒါနဲ့သင်ခန်းစာကိုထည့်လိုက်တယ်။
sudo aptitude update && sudo apt-get install libssl-dev libdb-dev libdb ++ - dev libqrencode-dev qt4-qmake libqtgui4 libqt4-dev libboost1.48-dev libminiupnpc-dev libminiupnpc8 libboost-system1.48-dev libboostystem dev libboost-program-options1.48-dev libboost-thread1.48-dev libboost-chrono1.48-dev build-essential git
git clone ပါ https://github.com/dogecoin/dogecoin.git
dogecoin-qt.pro 's / -mgw46-mt-sd-1_53 // g' ၏ sed -i
ထိုအခါ voila 😀
zypper သည် libopenssl-devel တွင်မြှင့်တင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်မှု git libdb-4_8 libdb-4_8-devel libqt4-devel
make command မချမှီ MAKEFILE ကိုပြုပြင်ရန်လိုသည်။ INCPATH အပိုင်းတွင်လိုင်း၏အဆုံးတွင်ဤကိုထည့်ပါ။ -I / usr / include / db4.8
စကားဝိုင်း Debian run နှင့် "mining" 🙂
သင့်ရဲ့ဒင်္ဂါးများကိုသင်၏ကွန်ပြူတာပေါ်တွင်ထားရန်နှင့်အင်တာနက် hosting အတွက်မဟုတ်ပါ
Javier Yanez ဟုသူကပြောသည်
သင် command များကိုကွပ်မျက်သောအခါသင်သိ
-e expression # 1, character 1: အမည်မသိအမိန့်: " "
ပြီးတော့ "make" ကိုကွည့်တဲ့အခါငါဒါရတယ်
*** သတ်မှတ်ထားသောရည်မှန်းချက်နှင့်မည်သည့် makefile ကိုမျှရှာမတွေ့ပါ။ အမြင့်
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုတိတိကျကျမသိပါ၊ သို့သော်ပြBitနာမှာကျွန်ုပ်သည်မှန်ကန်စွာမဖတ်ရပါက Bitcoins သည် SLI ကဒ် ၄ ခုအထိသွားပြီးဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်္ချာဆိုင်ရာပြevolနာများပေါ်ပေါက်လာပြီး PC အတွက် ၄ င်းတို့ကိုဖြေရှင်းရန်ပိုမိုခက်ခဲလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်သုံးစွဲနေသောလက်ရှိအသုံးစရိတ်သည်သင်ရရှိမည့်မည်သည့်ငွေကြေး၏တန်ဖိုးထက်များစွာမပိုပါ။
ထိုပြproblemနာကို PPC မှဖြေရှင်းသည်
နောက်ဆုံး command ဖြင့်ငါရ:
"./Minerd: ထောက်ခံမှုမရှိသောအငြင်းအခုံ 'user.worker: password'
PS: ငါ "အလုပ်သမား" "စကားဝှက်" နှင့် "အသုံးပြုသူ" ကိုအစားထိုးခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်ထုတ်ဝေမရပါ။ ဘာဖြစ်တာလဲ?
$ ./minerd -url stratum + tcp: //dogeu.nut2pools.com: 5585 –userpass user.worker: စကားဝှက်
-url နှင့် -userpass အငြင်းပွားမှုများရှိကြောင်းသတိရပါ
သတ္တုတွင်း ... အလှူငွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သော Doge အလွန်အမြတ်အစွန်း
ဒါ crypto wow
Arch Linux တွင်သင်အထုပ်ကို AUR တွင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဒီ crypto ငွေကြေးနဲ့ဘာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲ။
၎င်းကို Bitcoins များအတွက်လဲလှယ်သည်။ သင်ကဒေါ်လာများအတွက် Bitcoins များသို့မဟုတ်သင်အသုံးပြုနိုင်သောအချို့နေရာများတွင်လဲလှယ်နိုင်သည်။
သင်ထပ်မံသတ္တုတွင်းပြန်လုပ်လိုပါကသင်ဖိုဒါသို့သွားပါ၊ မျက်နှာပြင်ကို execute နှင့်သင်၏အသုံးပြုသူ၊ သင်၏အလုပ်သမားနှင့်အလုပ်သမားစကားဝှက်ပါသောရှည်သော command ကိုရေးပါ။
Allan herrera ဟုသူကပြောသည်
ခဏလောက်ခွင့်ပြုပါ၊ သို့သော်မှတ်ပုံတင်စာမျက်နှာရှိလင့်ခ်ကအလုပ်မလုပ်ပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကို ကျေးဇူးပြု၍ URL ပို့ပါ။
Allan Herrera သို့ပြန်သွားပါ
ဤအချက်အလက်သည်ခေတ်နောက်ကျသွားပြီသို့မဟုတ် nut2pools « site »သည်သေသွားပြီဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ နောက်ဆုံးပေါ် nut2pools « site »မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ။
ExMplayer: 3D အထောက်အပံ့နှင့်အတူ multimedia player၊ Facebook နှင့်အခြားအရာများ
AjudaLinux! ဗားရှင်း 0.2.0!